I-Ultimate Guide to Exemestane yokwelapha umdlavuza webele emadodeni
Konke mayelana ne-Exemestane
I-1. Kuyini i-Exemestane? Isebenza kanjani? I-2. I-Exempestane isebenza kanjani?
I-3. Ukusetshenziswa kwe-Exemestane I-4. Isilinganiso se-Exemestane
I-5. Imiphumela ye-Exemestane I-6. I-Exemestane isigamu-impilo
I-7. Imiphumela ye-Exemestane I-8. Izinzuzo ze-Exemestane
I-9. Ukubuyekezwa kwe-Exemestane I-10. I-Exemestane edayiswayo
I-11. I-Exemestane yokwelapha umdlavuza webele emadodeni
1.Kuyini i-Exemestane? Isebenza kanjani?
I-Exemestane (107868-30-4) yisidakamizwa somlomo esisetshenziselwa ukwelashwa kwezinhlobo ezithile zomdlavuza webele njengesifo somdlavuza webele we-hormone-receptor. Isidakamizwa sisetshenziselwa ukwelashwa komdlavuza kwabesifazane emva kokumisa esikhathini. I-Exemestane (107868-30-4)futhi idlala indima ebalulekile ekuvimbeleni ukubuyela komdlavuza kuziguli. Ngokuvamile, ukukhula komdlavuza webele kungakhuthazwa yi-hormone ye-estrogen. Lesi sidakamizwa sisize izigidi zeziguli eziphethwe izinhlobo ezithile zomdlavuza, kanti udokotela uzoyilungiselela imithi ngemva kokuhlola isimo sakho. Lesi sidakamizwa sisebenza ngokunciphisa amazinga ama-hormone e-estrogen emzimbeni wakho, esiza ekunciphiseni nasekuguquleni imiphumela ye-cancer yamabele.
Kodwa-ke, naphezu kwalesi sidakamizwa kuba ukutholakala okukhulu okumele kukusize ukulawula umdlavuza webele, abesifazane beseminyakeni yobudala yokubeletha badangala ukuyisebenzisa. Isidakamizwa singasetshenziswa kanye neminye imithi efana ne-goserelin (i-Zoladex) noma enye ngokuya ngesimo sakho. Ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngaphandle kwemithi kadokotela kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu, ngakho-ke, kunconywa ukuba uhlale uhlolwa ngaphambi kokuqala ukuyisebenzisa. Isidakamizwa sitholakala emikhakheni ehlukene efana Aromasin kodwa okuqukethwe, futhi umthamo uhlala ufana. Imithi kufanele ikuholele kuyo yonke inqubo kusukela ekuthengeni kuze kusetshenziswe.
Ungathenga izidakamizwa ku-inthanethi noma kunoma imuphi umthengisi ohloniphekile okuzungezile. Kodwa-ke, kudingeka uqaphele uma uthenga noma yimiphi imithi ngoba ungathola kalula imikhiqizo yamanga engakwazi ukuletha imiphumela oyifunayo. Sizoxoxa ngokuthi singayithola kanjani futhi kuphi ukuthenga i-Exemestane engcono kakhulu nekhwalithi kamuva kulesi sihloko.
2.I-Exempestane isebenza kanjani?
Njengoba kushiwo ngenhla, lesi sidakamizwa sisebenza ngokunciphisa noma ukunciphisa ukukhiqizwa kwe-hormone ye-estrogen emzimbeni wakho. Le hormone iyisisusa sokuthuthukiswa komdlavuza webele, futhi uma kukhona ukukhiqizwa okuncane, kusho ukuthi uzolawula ukukhula kwesifo. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sisebenza kuphela ekwelapheni uhlobo lwe-estrogen receptor positive (ER +) uhlobo lwegazi lamabele. Lokhu kusho ukuthi, uma umdlavuza wakho webele unemitholampilo ye-hormone engafanele, i-Exemestane ngeke ikusize ukulawula lesi sifo. Ngakho-ke, akuwona wonke umdlavuza ongaphathwa ngokusebenzisa le mithi.
I-Estrogen yi-hormone yezocansi edlala indima ebalulekile ekuzalweni kocansi, yingakho abesifazane besakwazi ukufika esikhathini sokuya esikhathini bayadangala ukusebenzisa le mithi. Uma ngabe ungowesi sigaba, udokotela wakho kuzodingeka akhombise enye imithi yomdlavuza wakho webele ngaphandle uma ungahle uhlele ukuzala abantwana futhi. I-estrogen ephansi kusho ukuthi awukwazi ukhiqiza njengowesifazane ngakho-ke kubalulekile ukuba uhlolwe ngaphambi kokuqala ukusebenzisa lesi sidakamizwa. Le mithi iyingxenye yezidakamizwa ze-aromatase
Lesi yisidakamizwa somlomo esetshenziswa ekwelapheni izinhlobo ezithile zomdlavuza webele. Ngaphandle kwalokho, i-Exemestane (107868-30-4) nayo isetshenziselwa ukuvimbela umdlavuza webele ukuze ubuyele emuva emva kwemithi. I-Exemestane isetshenziselwa iziguli zomdlavuza webele ezithola ukwelashwa ngesidakamizwa esibizwa ngokuthi i-tamoxifen ngeminyaka ye-2-3 futhi ngaphandle kokuthuthukiswa okuphawulekayo. Lesi sidakamizwa sinikezwa iziguli zomdlavuza webele ngemuva kokuhlinzwa okunciphisa amathuba okuba nesifo esathuthuka futhi emzimbeni wakho. Uma kwenzeka uthola i-radiotherapy noma i-chemotherapy, imithi yakho izokwazisa ngesikhathi esihle sokuqala ukuthatha i-Exemestane.
Ngakolunye uhlangothi, i-Exemestane isetshenziselwa ukwelashwa kokuqala kwezinhlobo ezithile zomdlavuza webele. Esikhathini sokuqala somdlavuza webele, udokotela uzokululeka ukuthi usebenzise lesi sidakamizwa uma isimo singakabi kakhulu, futhi uma kungekho sidingo sokuhlinzwa. Ngezinye izikhathi izidakamizwa zinikezwa neziguli ukuba zinciphise isifo somdlavuza webele ngaphambi kokuhlinzwa. Imithi yakho iyoba ngumuntu ongcono kakhulu wokukwazisa ngesikhathi esifanele sokuthatha lesi sidakamizwa ngemva kokuhlola isimo somdlavuza wakho webele.
Lesi sidakamizwa sinqunywe ukusiza abesifazane abahlukunyezwa ngumdlavuza webele, okuye kwabi kakhulu ekunqophiseni kwabo ngesikhathi besithatha i-tamoxifen. Isidakamizwa sinciphisa amazinga e-estrogen hormone, esiza ekunqandeni izicubu zebele ezidinga i-hormone ukuthuthukisa. Abesifazane, ezinyathelweni zabo zakuqala zomdlavuza webele lapho beya esikhathini sokuya esikhathini, bangasebenzisa nalesi sidakamizwa ukuze basize bakwazi ukulawula lesi sifo. Ngezinye izikhathi umuthi ungasetshenziselwa ukwelapha umdlavuza webele kubantu besifazane abangakabi nokufinyelela esikhathini sokuya esikhathini, kodwa ngaso sonke isikhathi khuluma nodokotela wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-Exemestane.
Lesi yisidakamizwa somlomo futhi kufanele uthathe i-tablet eyodwa ye-25mg kanye ngosuku ngosuku lokudla. Isilinganiso sihlala njalo kuzo zonke iziguli zomdlavuza wephambili kanye nezibeletho zakuqala. Kubuyeleka ukuba uthathe lesi sidakamizwa ngesikhathi esifanayo usuku ngalunye ngemiphumela engcono. Qiniseka ukuthi ulandela yonke imiyalelo kadokotela phakathi nesikhathi sonke sokulinganisa. Ungathathi okungenani noma ngaphezulu kunalokho okushiwo imithi yakho. Uma kwenzeka unemibuzo noma ukukhathazeka uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha umthamo. Udokotela wakho angase akululekele ukuthi uthatha i-Exemestane iminyaka eminingana noma ngisho nokwandisa isikhathi.
The Isilinganiso se-Exemestane kufanele kuthathwe isikhathi esichazwe udokotela wakho kusukela isikhathi sincike esimweni sakho somdlavuza wesifuba. Ngokuvamile, lesi sidakamizwa kufanele sithathwe cishe iminyaka emihlanu kuya kweyishumi. Ngezinye izikhathi, ezinye iziguli ziqala ukuthatha isilinganiso se-Exemestane ngemuva kokuthatha i-tamoxifen iminyaka embalwa. Kodwa-ke, uma udokotela wakho encoma ukuthi uthathe lesi sidakamizwa ukwelapha umdlavuza webele obuyele noma usakaze kwezinye izingxenye zomzimba wakho, uzothatha umthamo we-Exemestane uma nje ugcina izifo zilawulwa.
Ngisho noma uthola kahle, ungayeki ukuthatha isilinganiso sakho ngaphandle kolwazi lomdokotela wakho. Ungase uzizwe uphulukiswa, kodwa umdlavuza usanda kuhamba futhi uma ungaphathwa kahle ungabuya ngemva kwesikhathi. Uma kwenzeka ungaphuthelwa umthamo ngenxa yesinye sezizathu, ngelanga elilandelayo ungathathi ithebhulethi eyengeziwe ukuze ukhokhele, nje uthathe ithebula elilodwa njengoba kunconywe udokotela wakho kusukela ku-Exemestane emzimbeni wakho kuyokwanela ukukuyisa usuku olulandelayo. Ukuze uphephe, ungalokothi ukhulise umthamo ngaphandle kokuthi udokotela wakho ancoma ngakho okuyinto engavamile kakhulu.
I-Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ukusetshenziswa, Ukuhamba, Ukulinganisa, Ukusika, Ukubhuqa(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
Lesi sidakamizwa sihlolwe iminyaka eminingi, futhi sibonise ukuletha imiphumela yekhwalithi uma isetshenziswe kahle. Sekuyiminyaka eminingi manje, i-Exemestane ibalulekile ekunakekeleni izinhlobo ezithile zomdlavuza webele kwabesifazane ngakho-ke labo abaye bafinyelela esikhathini sokuya esikhathini. Ngakolunye uhlangothi, izidakamizwa ziye zafakazela ukuthi zinamandla ekuvimbeleni umdlavuza webele ekubuyiseni emuva kwemithi. Umphumela obala ukuthi uzokujabulela emva kokusebenzisa lesi sidakamizwa ukwehlisa amazinga e-estrogen, okuyisisekelo esiyinhloko sokukhula komdlavuza webele emzimbeni wakho. I-Exemestane, uma isetshenziswe kahle, iveza imiphumela emihle kubasebenzisi.
Kodwa-ke, uma kusetshenziswe ngokweqile noma kusetshenziswe ngaphandle kokululekwa okufanele kwabezidakamizwa kungaholela emiphumeleni emibi efana nekhanda ngisho nangokwenyama. Ngakho-ke, kuhlale kudingekile ukuba uhlole ukuhlolwa kwezokwelapha ngaphambilini, njengoba uqhubeka nomthamo nangemva. Iziguli ze-Cancer zeluleka ukuba ziyohlolwa ngezikhathi ezithile zezokwelapha ukuqapha inqubekela phambili yemithi kanye nesimo sezempilo jikelele. Kukhona neminye imithi engasetshenziswa eceleni kwe-Exemestane ngemiphumela engcono, kodwa udokotela wakho uzokwazisa ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, qinisekisa ukuthi utshela udokotela wakho nganoma yisiphi isifo somzimba futhi uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela ngaphambi kokuthatha isilinganiso se-Exemestane.
I-Exemestane isigamu-impilo ine-24hrs, yingakho udinga kuphela ukuthatha ithebulethi eyodwa ye-25mg kanye ngosuku. Isidakamizwa sizohlala sikhuthele esimweni somzimba wakho futhi ugcine ukukhiqizwa kwama-hormone e-estrogen njengasezingeni eliphansi ngangokunokwenzeka. Ngisho noma ukhohlwa ukuthatha isilinganiso sakho, ungathathi umthamo owengeziwe ngosuku olulandelayo. Isidakamizwa esivele sisesimweni sakho somzimba siyokwanele ukukuyisa ngosuku olulandelayo. Ukuphila okuphelele yi-48hrs ngakho-ke ungabi ngokweqile, kungabangela imiphumela emibi kakhulu. Ungalokothi uthathe isilinganiso esingaphezulu noma esincane kunalokhu kunconywe udokotela wakho, ngisho noma udokotela wakho ephakamisa ukuthi uthinte ukuthatha isidakamizwa, izobe isasebenza ohlelweni lwakho lomzimba.
Njengezinye izidakamizwa, i-Exemestane inezinsizakalo zayo ezitholwa ngabantu abahluleka ukulandela imiyalelo yokulinganisa. Uma uthatha le mithi ngaphandle kokuya ehlolweni lwezokwelapha, kungenzeka ukuthi ube nemiphumela emibi kakhulu. Ukudlula ngokweqile kanye nokwelashwa yizona ezibangela kakhulu imiphumela ye-Exemestane. Isibonelo, umuthi ungase uhluleke ukukusebenzela ngenxa yesistimu yakho yomzimba noma izifo zomzimba. Lena imithi kadokotela, futhi ukuyithatha ngaphandle kolwazi lwakho udokotela kungaholela ekuthuthukiseni imiphumela.
Kunemiphumela emibi evamile ejwayelekile kubantu abasebenzisa i-Exemestane, kodwa ihamba ngemva kwezinyanga ezimbalwa zokulinganisa. Kodwa-ke, uma imiphumela emibi ikhula isikhathi eside noma ibe nzima kakhulu ukuthwala, yazisa ithimba lakho lezokwelapha ukuthola indlela engcono yokunciphisa. Imiphumela emibi ejwayelekile ifaka phakathi;
Izimpawu zokungena esikhathini sokuqala ngoba umuthi unciphisa ama-hormone e-estrogen emzimbeni wakho futhi yingakho kuphakanyiswa ukuthatha lesi sidakamizwa ngemuva kweminyaka yobudala bakho. Ungase ungakwazi ukuzala izingane ngemuva kokuqala ukuthatha lesi sidakamizwa.
Ungase uzwe ubuhlungu emajoyini akho kanye nemisipha yezinyanga zokuqala zokulinganisa, kodwa ziyanyamalala nesikhathi.
Ungase uhlangane nokucindezeleka kanye nomoya ophansi.
Ukuqwashisa kungenye inkinga evamile ukuthi abasebenzisi be-Exemestane bahlangene nokukhathala, ngisho nalapho ungasebenzi.
Ukwehliswa kwamathambo akho noma i-osteoporosis kuyomunye umphumela ohlangothini abanye abasebenzisi be-Exemestane ababhekana nakho.
Kukhona nezinye imiphumela emibi kakhulu uma kwenzeka uhlangabezana nabo, kufanele wazise udokotela wakho ngokushesha ngaphambi kokuba isimo sibi nakakhulu. Kodwa-ke, lemiphumela emibi kakhulu ehlangene ihlangene nabasebenzisi be-Exemestane. Zihlanganisa izinguquko zesikhumba nezinwele, ukwanda kwamazinga e-cholesterol emzimbeni wakho, ama-loos of appetite, nezinguquko zesibindi, phakathi kwabanye. Imiphumela emibi ye-Exemestane ngezinye izikhathi incike ekutheni umzimba wakho uphendukela kanjani kumuthi. Izidalwa zabantu ziyinkimbinkimbi, futhi ngezinye izikhathi umuthi ungase usebenze kahle kakhulu kuwe, kodwa uma umngane wakho ezama, kuphumela emiphumeleni emibi kakhulu. Kulukhuni ukusho ngokugunyazwa ukuthi yimiphi imiphumela emibi okufanele ulindzele uma usebenzisa le mithi.
Izindaba ezinhle ukuthi iningi lemiphumela emibi ye-Exemestane ingalawulwa uma utshela udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi ulandela yonke imiyalelo yesilinganiso esinikezwe umenzi wezidakamizwa nodokotela wakho naye. Futhi, qiniseka ukuthi uhamba ngokuhlolwa kwezokwelapha njalo ngemiphumela engcono. Yazisa udokotela wakho nganoma yisiphi isifo ongasithola ngaphambi kokuba uqale ukuthatha umthamo. Phakamisa konke ukukhathazeka nodokotela wakho ukuze ugweme noma yiziphi izinkinga.
I-Exemestane izinzuzo iyaziwa kakhulu ngokulawula izinhlobo ezithile zomdlavuza webele kwabesifazane. Ihlisa izinga lama-estrogen emzimbeni okudingwa yi-tumor tumors yebele. Ngakolunye uhlangothi, izidakamizwa zizokusiza ukuvimbela noma yikuphi ukuthuthukiswa komdlavuza wesifuba ngemuva kokuthola inqubo ephumelelayo yokuhlinzwa. Nakuba lena inzuzo eyaziwa kakhulu yokusebenzisa i-Exemestane, kunezinye izinzuzo ozijabulela ngokuthatha lesi sidakamizwa.
Isibonelo, lokhu yisidakamizwa somlomo, futhi lokho kusho ukuthi ngeke uhlangabezane nanoma yimiphi imijovo ngenkathi uthatha imithi yakho. Isidakamizwa sinomsebenzi othakazelisayo wokusebenza kwamahora we-48, futhi uma ungaphuthelwa umthamo ongenakho ukukhathazeka ngawo, udinga kuphela ukuthatha umthamo olandelayo ngosuku olulandelayo, futhi ulungile ukuhamba. Ucwaningo luye lwafakazela ukuthi i-Exemestane ingasiza ekuvimbeleni izicubu zomzimba ezivela e-oxidation kanye nokulimala okuvuthayo kokubili amadoda nabesifazane. Ngaphandle kwalokho, lesi sidakamizwa sisebenza kahle ekuvikeleni amangqamuzana omzimba wakho kusuka emonakalweni ku-DNA yawo ngemisebe ye-UV ngesikhathi se-oxidation. I-Exemestane isebenza njenge-agent enhle kakhulu yokulwa nokuvuvukala.
Ukubuka ezihlukahlukene Ukubuyekezwa kwe-Exemestane, uzobona ukuthi lesi sidakamizwa sithole okuhlangenwe nakho okuhlukile komsebenzisi kusuka komunye umuntu kuya komunye. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sinokulinganisa okuthakazelisayo kanye nenani elihle lokubuyekezwa okuhle, okusho ukuthi kuye kwaba usizo olukhulu kubasebenzisi abaningi. Isidakamizwa siye sabalulekile emhlabeni wezokwelapha ikakhulukazi ekwelapheni nasekulawuleni izinhlobo ezithile zomdlavuza webele kwabesifazane. Abasebenzisi abaningi badumise lesi sidakamizwa ukuba sibe namandla ekunciphiseni ukukhiqizwa kwama-hormone e-estrogen emzimbeni, okubangela ukukhula nokusabalalisa umdlavuza webele.
Kukhona abasebenzisi abathandi ngoba ungumuthi oqinile ngomlomo oletha imiphumela yekhwalithi uma isetshenziswe kahle. Abaningi be-Exemestane abasebenzisi banelisekile ngokuthi imithi ibasize kanjani ukuphatha umdlavuza webele. Abanye baqinisekisa ukuthi izidakamizwa ziye zadlala ingxenye ebalulekile ekukhuleni komdlavuza webele futhi zivimbela lesi sifo ukuba singabuyeli. Ucwaningo lwezokwelapha nolwazi oluhlukahlukene lukhombisa namandla alo muthi webelevuza webele. Ngamafuphi, iziguli eziningi zesifo somdlavuza webele zinikeze izibuyekezo ezinhle ze-Exemestane nezilinganiso ezinhle kakhulu.
Ngokulinganayo, abanye abasebenzisi abazange babe nolwazi oluhle ngalesi sidakamizwa futhi babonisa ukudumazeka kwabo. Kuyinto evamile imikhiqizo eminingi kakhulu ngakho izidakamizwa zihluleka ukusebenza kwabanye abasebenzisi. Kodwa-ke, iningi labasebenzisi be-Exemestane abaye babhekana nemiphumela emibi kakhulu kubonisa ukuthi ukwehluleka kwabo ukubandakanya imithi kuyo yonke inqubo. Ukuhlolwa kwezokwelapha kubalulekile ngaphambi kokuqala ukusebenzisa noma yisiphi isidakamizwa. Kunconywa ukuthi uxhumana nodokotela wakho ngokushesha uqale ukubhekana nanoma yimiphi imiphumela emibi lapho uthatha lesi sidakamizwa. Cishe yonke imiphumela ye-Exemestane side ingalawulwa uma utshela udokotela wakho ngesikhathi esifanele.
Ngokuvamile, i-Exemestane iyisidakamizwa esinamandla esiye sabaluleke kakhulu ekwelapheni umdlavuza webele kulabo besifazane. Indlela engcono kakhulu yokuthola izinzuzo eziphezulu zezidakamizwa ukunamathela kumthamo ophakanyisiwe futhi njalo uhilele ithimba lakho lezokwelapha uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela ephakeme. Ungayeki ukuphuza umuthi ngaphandle kweseluleko sikadokotela ngoba ungase uhluleke ukulawula umdlavuza webele, okuyinto isifo sobulali. Ngezinye izikhathi izidakamizwa zingase zikuhluleke ukukusebenzela, kodwa udokotela wakho uzokunikeza esinye isidakamizwa esimnandi esimisweni somzimba wakho.
I-Exemestane edayiswayo ithengiswa ngaphansi kwamagama wegama elihlukile kumanani ahlukene noma izifunda, futhi igama legama elivame kakhulu kulo muthi ngu-Aromasin. Ungathenga i-Exempestane ngobuningi kwi-intanethi noma kusuka kunoma yiliphi ikhemisi elikuzungezile, kodwa qiniseka ukuthi awuqali ukuthatha ngaphandle kweseluleko sikadokotela wakho. Qinisekisa ukuthi wena Thenga i-Exemestane powder kusuka kumdayisi ohlonishwayo noma umkhiqizi wemiphumela engcono. Akuzona zonke Umhlinzeki we-Exemestane uthola inthanethi kungathembeka. Abanye bangase babe nekhwalithi ephansi noma izidakamizwa ezijwayelekile ezingaba yingozi empilweni yakho. Funa ukubuyekezwa kwamakhasimende ukukuqondisa ekwenzeni isinqumo esifanele.
Udokotela wakho uyokuqondisa ukuthi ungathola kanjani i-Exemestane engcono kakhulu nephezulu kakhulu kumthengisi onokwethenjelwa futhi othembekile. Singumkhiqizi we-Exemestane umhlabeleli kanye nomphakeli esifundeni, futhi senza ukudiliva okufika ngesikhathi. Vakashela iwebhusayithi yethu ukuze wenze i-oda lakho namuhla futhi uqiniseke ukuthi uthole i-Exemestane yekhwalithi eyokusiza ukulwa nomdlavuza webele. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka. Ngakho-ke, ungenza i-oda yakho ngokunethezeka kusukela enduduzo yendlu yakho. Uma unemibuzo noma ukukhathazeka, ungahlala uxhumane nathi ngokusebenzisa i-imeyili yethu kanye noxhumana nabo kwiwebhusayithi yethu.
Ngakolunye uhlangothi, qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi yimiphi imithetho ezweni lakho elikushoyo mayelana nokusetshenziswa, ukutholakala, nokuthengwa kwe-Exemestane. Singabantu inkampani egcina umthetho, futhi asifuni ukubeka amakhasimende ethu enkingeni nemithetho yezwe lakubo yokungenisa noma ukuthenga imikhiqizo yethu ephezulu. Ngokwesibonelo, e-United States of America naseCanada, i-Exemestane igcina imithi yokwelapha kuphela. Lokho kusho ukuthi awukwazi ukuthenga umuthi ngaphandle kokuba unedokotela kadokotela. Kodwa-ke, akulona emthethweni ukuthenga, ukuthenga, noma ukusebenzisa izidakamizwa, kodwa i-Exemestane ayiyona imithi engaphezu kweqile kula mazwe amabili.
11.I-Exemestane yokwelapha umdlavuza webele emadodeni
I-Exemestane iyisidakamizwa esihle kakhulu esiye safakazelwa eminyakeni edlule ukuba ibalulekile emhlabeni wezokwelapha ekwelapheni umdlavuza webele kulabo besifazane. Isidakamizwa sisebenza ngokunciphisa ukukhiqizwa namazinga e-estrogen hormone emzimbeni wakho obhekene nokukhula kanye nokusakazeka komdlavuza webele emzimbeni wakho. Isidakamizwa sisetshenziswa ikakhulukazi besifazane abaye bafinyelela esikhathini sokuya esikhathini ngoba kungathinta abesifazane abasesimweni sokubeletha kwengane. I-Exemestane nayo ibalulekile ekuvikeleni abasebenzisi ekubuyiseni noma ekusakazeni umdlavuza webele emva kokuthola ukwelashwa okuphumelelayo. Ngokuya ngesimo sakho somdlavuza webele, udokotela wakho angakuleka ukuba uthathe leso sidakamizwa njengokwelashwa uma umdlavuza wakho usezigaba zawo zakuqala. Imithi yakho ingabuye ibeke i-Exemestane isikhathi esithile ngaphambi kokusebenza kwenqubo yokuhlinzwa.
Kunconywa ukuthi uthathe i-tablet eyodwa yama-25mgs ngosuku, okuyinto isilinganiso esivela kokubili okuthuthukisiwe kanye neziguli ezithinta umdlavuza webele ezinyathelweni zakuqala. Isidakamizwa singasetshenziswa kanye neminye imithi ebalulekile udokotela wakho azozizwa efanelekile kuwe. Khumbula ungalokothi ukwandise noma unciphise umthamo wesethi ngaphandle kokubonisana nemithi yakho. Uma kwenzeka uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela emibi ngenkathi uthatha izidakamizwa uxhumane nodokotela wakho usizo. Ezinye imiphumela emibi ezifana nokukhanda ikhanda, isizungu, nokuhlanza kungaba okujwayelekile ezinyangeni zakho zokuqala zokulinganisa, kodwa uma zihlala isikhathi eside kunokujwayelekile zikwazisa i-physic yakho. Cishe yonke imiphumela ye-Exemestane ingalawulwa uma uthatha izinyathelo ezifanele futhi ulandele imiyalelo yokulinganisa.
I-Ultimate Guide kuDihydroboldenone / DHB ye-Bodybuilding(Ivula kuthebhu entsha yesiphequluli)
Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... & Winquist, E. (2011). I-Exempestane yokuvimbela umdlavuza webele wezinsikazi kubesifazane be-postmenopausal. I-New England Journal of Medicine, 364(25), i-2381-2391.
Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., ... & Melichar, B. (2013). I-Everolimus kanye ne-exemestane kwiziguli ze-postmenopausal ezine-cancer + ye-HR + yesifuba: Ukuhlaziywa okuqhubekayo okuqhubekayo kwe-BOLERO-2. Ukuthuthukiswa kokwelapha, 30(10), i-870-884.
Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I., ... & Ciruelos, E. (2014). I-adjuvant i-exemestane ne-ovarian ukususwa emdlalweni we-premenopausal webele. I-New England Journal of Medicine, 371(2), i-107-118.